आज तपाईहरुको प्रेस विज्ञप्ति हेरेँ । हाँसो उठेर आयो । आफ्नै संस्थाको अध्यक्षमाथि त्यही पनस त्यही संस्थाको लेटर हेडमा निर्मम शब्दको प्रयोग गरिएको पाएँ । नयाँ प्रयास अनि अभ्यास गर्नु भएछ ।
तपाईले निकाल्नु भएको विज्ञप्ति हेरिसकेपछि चासोका साथ मैले तपाईहरूको सचिवालयले टिपोट गरेको भनिएको पहिलेको १०० जनाको नामावली र एनआरएनए जापानले प्रकाशन गरेको १६६ जनाको नामावली ट्यालि गरेर हेरेँ ।
अनि तपाईसँग केहि प्रश्न गर्न केहि सुझाव दिनुपर्ने मैले आवश्यक ठानेँ । यहाँभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा निकालिएको तपाईहरुको नामवाली विधानसम्मत थियो ? कुन आधारमा तयार गर्नु भयो ? जबकी तपाईहरुको एक सयजनाको नामवलीमा वर्तमान कार्यसमिति र निवर्तमान कार्यसमितिको पदाधिकारीहरूको नै नाम छैन । एनआरएनएको विधानसम्मत प्राथमिकतामा पर्ने व्यक्तिहरूको नाम छैन । प्राथमिकतामा पर्ने भनेर उम्मेदवारका श्रीमतीहरूको नाम कसरी राख्नु भयो ?
एनआरएन जापानको पञ्जीकृत सदस्यनै नभएका व्यक्तिहरूको नाम समेत राख्न भ्याउनु भएछ ।अनि अहिलेसम्म कार्यसमितिमा नै नभएकाहरुको चाहिँ नामवलीमा नाम छ । तपाईहरुले भनेको उम्मेदारलाई मतदान गर्ने व्यक्तिको मात्र नाम राखे जस्तो लाग्यो । त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने तपाईहरुको कर्तव्य हो कि रमिता देखाउने तपाईहरुको नियत हो ?
अहिलेको नामावलीमा नियमविपरित गरिएको प्रमाण दिन सक्नु हुन्छ त जापानबासी नेपालीहरुलाई ? १०० जनाको लिस्टमा उम्मेदारको श्रीमती हुँदैमा तपाईहरुले कसरी नाम राख्नु भयो । यसको उत्तर तपाईहरुसँग छ ?
अहिलेको नामावलीमा सबै नेपालीलाई थाहा हुने गरी नामावलीको आधारका बारेमा स्पष्ट जानकारी पनि गरिएको छ त ! तपाईहरु कार्यसमितिले नामावली पारित गर्दा त्यो सबै कुराको जानकारी लिएर गर्नु पर्दैन ? कि जे पनि बहुमतले पास गरे हुन्छ ? बहुमतले जे गरे पनि हुने हो ? नियमसंगत नीतिसंगत हुनु पर्छकि पर्दैन ?
हामीले बुझेको कुरा कुनै संस्थाको अध्यक्ष संस्थाभित्रको सिंगो संस्था हो भन्ने हेक्का हुनुपर्ने हो । तपाईले किन यसरी गलत संस्कारको विकास गर्न खोज्नू भएको ? तपाईको पनि कुनै दिन अध्यक्ष हुने सोच पक्कै होला । तपाईले सिकाएको यो गलत प्रयास तपाईमा पनि लागू भएको दिन मात्र तपाईले चाल पाउनुहुनेछ ।
त्यसैले तपाईहरू कसैको हतियार नबनी दिनुस् । वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायत कार्यसमितिका सबैजना व्यक्तिहरू जवाफदेही बनिदिनुस् । जिम्मेवार बनिदिनुस् । यदि यस्तै हो भने हामी मतदाताहरूले यो कार्यसमितिलाई असक्षम ठानेर बहिष्कार गर्ने दिन नआओस् ! अलिक जवाफदेही हुन सिक्नुहोस् ।